Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 15/07/2019
Verification of 22,432 Displaced PersonsAt the 3rd Joint Working Group (JWG) Meeting on the Repatriation of Displaced Myanmar Residents from Bangladesh held in Dhaka in October 2018, the Bangladeshi side handed over the list of 22,432 displaced persons to the Myanmar delegation.
As of 10 July 2019, the Immigration authorities of Myanmar have already checked 18,629 displaced persons out of 22,432. In order to ensure the smooth repatriation, the breakdown lists (village-wise) of 3,450 displaced persons, who have been verified as those resided in Myanmar, were sent to the Bangladeshi side in seven batches as of 11 July 2019.
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ဘင်္ဂလား‌‌‌‌ဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခဲ့သူများ ပြန်လည်ခေါ်ယူရေးဆိုင်ရာ မြန်မာ – ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တတိယအကြိမ်မြောက် ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူ ၂၂,၄၃၂ ဦးစာရင်းကို မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့အထိ နေရပ်စွန့်ခွာသူ ၂၂,၄၃၂ ဦးအနက် ၁၈,၆၂၉ ဦးအား စိစစ်မှု ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများအား နေရာချထားရာတွင် မြန်ဆန် ချောမွေ့စေရန် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ စိစစ်ပြီးသူများအား ကျေးရွာအလိုက် ပြန်လည်စာရင်းပြုစုပြီး အသုတ်အလိုက် ပေးပို့လျက်ရှိရာ သတ္တမအသုတ်အထိ ကျေးရွာအလိုက် စိစစ်ပြီးသူ ၃,၄၅၀ ဦးစာရင်းအား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်သို့ ၁၁-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။